SSL iyo SEO: labadaba miyay labaduba leeyihiin?
Aynu bilowno inaan xusuusano qaar ka mid ah raadintaada ugu dambaysa, adoo fiiriya waxa aad raadineysay, hubinta inaad ka soo hor jeeddo ama aad raadsatid alaabo ama adeegyo qaar ah Webka. Waxaa laga yaabaa inaad booqatay bogagga shabakadda ee HTTP iyo HTTPS labadaba. Laakiin waa maxay farqiga u dhexeeya iyaga, gaar ahaan dhinaca aragtida SSL iyo SEO? Iyaga oo tixgelinaya saameynta ay ku leeyihiin ganacsiga e-ganacsiga iyo inta badan dukaamada webka, bal aynu aragno sida wanaagsan ee SSL iyo SEO ay ku sameynayaan dhabta.
SSL iyo SEO aad bay faa'iido u leedahay marka ay wadajir sameeyaan?
Aan ku bilowno asal farsamo iyo arag sida SSL u shaqeyso. Qayb ka mid ah Qalabka Protocol Protocol Security, wuxuu isticmaalaa keyd 2048-bit si loo ilaaliyo waayo-aragnimada isticmaalka iyada oo loo marayo hanaanka nabdoonaanta ee aqoonsiga, xaqiijinta, iyo xarigga ka dhexeeya serverka webka iyo shabakadda internetka laftiisa. Nabadgelyada SSL wuxuu ku yimaadaa saddex qaybood:
Nabadgelyo ayaa u shaqeynaya si loo hubiyo in ficilada taleefan ee hadda aan la haynin, sidaas darteed wax macluumaad ah looma afduubi karo nacaybka
Oo aynu ugu dambeyntii ku laabanno dhibicda - maxay tahay xiriirka dhabta ah ee u dhaxeeya SSL iyo SEO? Ama sidee baa amniga u wadi kartaa darajada boggaaga ee bogga Raadinta Natiijada Mashiinka? Sida meel kasta oo wanaagsan oo ku-meel-gaadh ah oo keenaya saameyn togan oo ku saabsan darajadaada, iyo sidoo kale qiimaha taraafigga iyo is-beddelka laftiisa. Waxaan ula jeedaa ammaankaaga internetka inuu sidoo kale saameyn toos ah ku leeyahay algorithms raadinta Google markaad go'aansato inaad ku siiso darajo sare. Hoos waxaan ka eegnaa xiriirka u dhexeeya SSL iyo SEO seddex siyood oo asaasi ah - darajooyinka, taraafikada, iyo isbedelka:
Sida hore loo soo sheegay, qiimeynta boggaaga hadda xitaa waxay ku xiran tahay nabadgelyada SSL tan iyo wixii ka horreeyay. Dib u eegista ilaa 2014-2015 marka Google uu soo saaray algorithms ugu horeysay ee loogu talagalay bogagga internetka ee HTTPS ku salaysan, amaanka SSL ayaa loo isticmaalay inuu noqdo halbeeg algorithm oo fudud oo lagu gaarayo go'aanka ugu dambeeya. Laakiin maanta, sida laga soo xigtay tirakoobka rasmiga ah, ku dhawaad ​​kala badh natiijooyinka raadinta bini'aadamka Google ayaa ku tilmaamaya shabakadaha internetka ee HTTPS oo leh shahaadada SSL. Intaa waxaa dheer, kaliya ilaa boqolkiiba 1 dhammaan qaababka internetka ee internetka ayaa lagu qiyaasay in ay yihiin ammaan. Sidaa darteed, sababta aadan u isticmaalin SSL iyo SEO si fudud ka hor tartanka, hal mar iyo weligeedba?
Iyadoo la tixgelinayo guulaha gaadiidka, rikoodhada ugu wanaagsan waxay bixiyaan socodka gaadiidka ee ballaaran, kaliya maaddaama dadka isticmaala intooda badan ay booqdaan website-kaaga, dadka dhagaystayaasha ah ee aad ka qeyb qaadan doonto. Intaa waxaa dheer, ammaanka internetka ee la heli karo wuxuu siinayaa qof kastoo iibsadaha ah ee ku soo galaya internetka oo ah signallo firfircoon oo ku saabsan maamulka boggaaga iyo kalsoonida. Inta badan dadka isticmaala waxay u badan tahay inay ka boodaan dhamaan ilo aan amaan ahayn oo guji natiijada raadinta iyaga oo u gudbinaya bogaggaaga internetka, iyaga oo markaa siinaya kor u kicitaanka bogga CTR.
Ka dib dhan, SSL iyo SEO waxay wada shaqayn karaan si ay wax u taraan isbeddelladaada si weyn. Waxaan loola jeedaa in macaamiisha suurtagal ah ee loo baahan yahay in loo rogo kuwa dhabta ah, marka ay soo booqdaan boggaga internetka si fiican loo ilaaliyo oo leh hay'ad aamin ah. Kaliya xusuusnow sida ku cad baaritaanada ugu horumarsan, in ka badan 80% macaamiisha aan horumarineynin waxay diidi lahaayeen ballanqaadkooda inay iibsadaan, oo kaliya marka la ogaado in xogta shakhsiga ee buuxsamay ay ka timaaddo isku xirnaanta ammaan la'aan Source .